Cooperative(Cooperative) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
ललितपुर । सहकारी क्षेत्रको एकमात्र बैंक राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेडले चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा ३५ करोड ३३ लाख ६६ हजार नाफा कमाएको छ। बैंकको गत आवको सोही अवधिको नाफा २७ करोड ५० लाख ४३ हजार रहेको थियो। उक्त नाफा अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २८.४७ प्रतिशतले बढी हो। बैंकले प्रकाशित गरेको वित्तीय विवरणअनुसार...
नयाँ सहकारी बैंक खोल्न प्रक्रिया अघि बढ्यो, छिटै विभागमा दर्ता हुँदै
काठमाण्डौ । नेपालमा अर्को नयाँ सरकारी बैंक सञ्चालनमा ल्याउने तयारी थालिएको छ। यसका लागि प्रारम्भिक भेला यही माघ १७ गते डाकिएको छ। भेलामा छलफल गरी यो बैंकको दर्ता प्रक्रिया सुरु गर्न सहकारी विभागमा फाइल पठाइनेछ भने स्वीकृति लिन नेपाल राष्ट्र बैंकमा प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। नयाँ सहकारी बैंकको नाम ‘नेपाल सहकारी बैंक’ राख्ने...
अब माघबाट सहकारीहरुले ऋण लगानीमा अधिकतम १% मात्र सेवा शुल्क लिन पाउने
काठमाण्डौ । सहकारी विभागले सहकारीहरुले ऋण लगानी गर्दा लिने सेवा शुल्क निर्धारण गरेको छ। विभागले हिजो मंसिर २२ गते प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारीहरुले ऋण लगानी गर्दा लिने सेवा शुल्क निर्धारण गरिएको जानकारी गराएको हो। अब माघबाट लागू हुने गरी सहकारीहरुले ऋण लगानी गर्दा अधिकतम १ प्रतिशतमात्र सेवा शुल्क लिन पाउने भएका छन्। विभागले...
कात्तिक १ गतेदेखि दुईवटा सहकारीमा सदस्य बन्न नपाइने, अटेर गरेमा रु. २ लाखसम्म जरिवाना
काठमाण्डौ । आउँदो कात्तिक १ गतेबाट एउटै प्रकृतिका दुईवटा सहकारीमा सदस्य बन्न नपाइने भएको छ। सहकारी विभागले सहकारी ऐन, २०७४ मा भएको व्यवस्थाअनुसार कात्तिक १ गतेदेखि दोहोरो सदस्यता अन्त्य गर्नुपर्ने भएको हो। सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ३२ को उपदफा १ (क) मा कुनै व्यक्ति एक स्थानीय तहको एकै प्रकृतिका एकभन्दा बढी संस्थाको सदस्य बन्न नपाउने...
काठमाण्डौ । डेटम सिस्टम्स प्राइभेट लिमिटेडले विकास गरेको ग्राहकलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंककारी क्रियाकलापमा लगानी गर्नबाट रोक्ने ट्रस्टएमल सिस्टम सहकारी संस्थाको लागि पनि उपलब्ध गराउन डेटम सिस्टम्स प्राइभेट लिमिटेड र सहकारी संस्थाहरुमा बैंकिङ सफ्टवेयर उपलब्ध गराउने अग्रणी संस्था इन्फो डेभलपर्स प्राइभेट लिमिटेडबीच समझदारी...
विकास बैंकहरुभन्दा सहकारी बैंकको नाफा बढी, खराब कर्जामा पनि उल्लेख्य सुधार
काठमाण्डौ । कोरोना कहरबीच विकास बैंकहरुलाई पछि पार्दै गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को चौथो त्रैमासमा राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेडले लोभलाग्दो प्रगति गरेको छ। सहकारी क्षेत्रको एकमात्र बैंकका रुपमा स्थापित भएको यो बैंकले विश्वमै महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोनाबीच समेत मुनाफामा उल्लेखीय प्रगति हासिल गरेको छ। बैंकले समीक्षा अवधिमा खुद नाफा...
सहकारीका ऋणिहरुलाई सहुलियत, ऋण तिर्ने भाखा १ वर्षसम्म सार्न सकिने
काठमाण्डौ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले जस्तै सहकारीहरुले पनि ऋणिहरुले किस्ता तिर्ने समयको भाखा ६ महिनासम्म सार्न पाउने भएका छन् । सहकारी विभागले देशभरका सबै सहकारीहरुलाई एक परिपत्र गर्दै यस्तो व्यवस्था गर्न छुट दिएको हो । विभागले सहकारीहरुलाई पठाएको १० बुँदे मार्गदर्शन अन्तर्गत २०७७ असारसम्म असूल हुन नसकेको कर्जाको किस्ता...
काठमाण्डौ । ललितपुरमा केन्द्रीय कार्यालय रही राष्ट्रियस्तरको सहकारी पशुपति सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लि. ले सहकारी–सहकारी बीच बृहत एकीकरण अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ । ७७ जिल्ला र ७५३ स्थानीय तहका संस्थाहरुलाई समेटेर नेपालकै नमुना सहकारी संस्था निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित बृहत एकीकरण अभियान संचालन गर्न लागेको हो । बृहत...
काठमाण्डौ । बैंकहरुमा झै आगामी आर्थिक वर्षमा सहकारी संस्थाहरुमा समेत मर्जरको लहर चल्ने देखिएको छ । सरकारको तर्फबाट आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यस्तो संकेत गरेकी हुन् । उनले समान उद्देश्यका आधारमा स्थापना भई संचालित सहकारीहरुलाई एकआपसमा गाभिन प्रोत्साहित गरिने घोषणा...
सहकारी क्षेत्रका अगुवा तथा केन्द्रीय बैंकका प्रतिनिधिले राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीमा सहकारीलाई प्रवेश गराउन कानूनी सुधार जरुरी रहेको आवश्यकता आँैल्याएका छन् । नेपाल सहकारी पत्रकार समाजले आज आयोजना गरेको ‘सहकारीको वित्तीय सेवामा प्रविधि प्रयोग’ विषयक श्रव्यदृश्य अन्तक्र्रियामा उहाँहरुले सहकारीलाई राष्ट्रिय भुक्तानी...
सहकारीबाट अब जुनसुकै बैंकमा रकम ट्रान्फर गर्न सकिने
काठमाण्डौ । सहकारी संस्थाका सदस्यहरुले अब आफ्नो सहकारीको खाताबाट सिधै बैंकको खातामा रकम पठाउन सक्ने भएका छन्। हाम्रो टेक्नोलोजीको मोबाइल बैंकिङ प्लेटफर्म ‘एम बैंक एप’ प्रयोग गरी सहकारीको खाताबाट रकम सिधै बैंक खातामा ट्रान्सफर गर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीकाअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति प्राप्त गरेका वाणिज्य बैंक,...
काठमाण्डौ । सहकारी विभागले देशभरका सहकारी संस्थाहरुलाई स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गरी प्रभावकारी ढंगले सेवा संचालन गर्न सर्कुलर जारी गरेको छ । शाखा अधिकृत देवराज लुइँटेलले यस्तो सर्कुलर जारी गरेका हुन् । कोभिड १९ संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जारी लकडाउन अवधिमा पनि प्रशासनसँग समन्वय गरेर आफ्ना सदस्यहरुलाई प्रभावकारी...
काठमाण्डौका ५ सहकारीको दर्ता खारेज
काठमाण्डौ । पहिलो पटक सहकारी विभागले काठमाण्डौका ५ वटा सहकारी संस्था खारेज गरेको छ । सहकारी विभागका रजिष्टार टोकराज पाण्डेका अनुसार सहकारी ऐन बर्खिलापमा सञ्चालनमा रहेकाले विभागले काठमाण्डौका विभिन्न ५ सहकारी संस्था खारेज गर्ने निर्णय भएको हो । सहकारी संस्थाहरु सहकारी ऐनको मूल्य मान्यतामा नरही आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न...
काठमाण्डौ । काठमाण्डौ महानगरपालिले महानगरभित्र सञ्चालित सहकारी संस्थालाई एकापसमा एकीकरण गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिएको छ । यस क्रममा बानेश्वर र पुतलीसडक क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका सात सहकारीलाई एकीकरण गर्ने तयारी गरिएको कामपा प्रशासन विभागका प्रमुख नमराज ढकालले जानकारी दिनुभयो । यसअघि कामपाभित्रका विभिन्न चार सहकारीलाई एकीकरण गरी...
टेलिकमका रिचार्ज कार्डमा नम्बर मेटिएर कमसेकम ६ वटा नम्बर मात्र देखिएमा वेबसाइटबाटै रिचार्ज गर्न सकिने
काठमाण्डौ । नेपाल टेलिकमका रिचार्ज कार्डमा अधिकांश नम्बर मेटिएर कमसेकम ६ वटा नम्बर मात्र देखिएका छन् भने पनि रिचार्ज गर्न सकिने भएको छ । यसका लागि ग्राहकले पहिलो चरणमा कम्पनीको वेबसाइटबाट आफैंले रिचार्ज गर्न सक्नेछन् । कार्डको पिन नम्बर प्रष्ट नभएमा वा कोरिएमा ग्राहकले नम्बर बिग्रिएको रिचार्ज कार्डको सिरियल नम्बर, रिचार्ज कार्डमा...